ESDWAGOV - Oromo language assistance - NEW
Dhuma faayidaawwan hojii Dhabdee dhukkuba daddarbaa federaalaa
Gaaffii keessaan irra dhiibbaan gahuu danda'a
Hojii kan qabdan yoo taatanii fi faayidaawwan hojii dhabdummaa gaafachuu yoo dhaabdan illee, maaloo ergaa barbaachisaa kana dubbisaa.
Danbiin CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, Gargaarsa Vaayirasii Koronaa, Deeggarsa Yeroo Rakkoo, Wabii Diinagdee) fi sagantaawwan federaalaa biroo kan faayidaawwan hojii dhaabdummaa bal'isanii fi dheeressan yeroo tajaajila isaanii dhumaa jira. Torban fulbaanaa 4 dhumu torban dhumaa faayidaawwan sagantaawwan kanneenii itti kaffalamuu danda'aniidha.
PUA (Pandemic Unemployment Assistance, Gargaarsa Hojii Dhabdummaa Dhukkuba Daddarbaa) – Kan hojii mataa isaanii hojjataniif, kan yeroodhan hojjataniif, kontiraaktaroota of danda'aniifi warreen biroo kanneen faayidaawwan hojii dhabdummaa wal irraa hin cinneef ulaagaa hin guunnef.
PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, Beenyaa Hojii Dhabdummaa Tasaa Dhukkuba Daddarbaa) - Erga isin faayidaawwan Hojii dhabdummaa adda hin citin fixxanii booda faayidaawwwan dheereessa.
FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation, Beenyaa Hojii Dhabdummaa Dhukkuba Daddarbaa Federaalaa) – Gaafattoota ulaagaa guutan hundaaf torbaaniitti $300 dabalataa.
Amma maaltuu godhamuu qaba
Gaaffiiwwan keessan kan torbanii guutuu itti fufaa
hanga fulbaanaa 4 tti torbanoota faayidaawwan itti argachuu barbaadaniif guutuu itti fufaa.
ergaawwan gara fulduurratti nurra argatan ilaalaa
Ergaawwan Eenyummeessaa eServices ykn imeelii keessan keessatti nurra siniif ergamuu danda'a. Gaaffiiwwan odeeffanoodhaf gaaffannuu hundaaf deebii kennaa. Yoo gaaffachuu dhiistan ykn hojii argattan illee, ammallee isin qunnamuun nurra jiraachuu mala.
Barbaacha hojii keessaniin gargaarsa argadhaa
WorkSource hojii ykn ogummaa keessan itti aanuu akka argataniif sin gargaaruu danda'a. Eegaluuf gara WorkSourceWA.com deema. Qabeenyota jalatti, Waajjira sin cinaa jiru argachuufi tajaajilooni sarara irraafi qaamaan argaman maal akka ta'an ilaaluuf WorkSource locator
Fulbaanaa 4 boodas faayidaawwan yoo isin barbaachise, kan armaan gadii godhuu dandeessu:
Gaaffii hojii dhabdummaa yeroon irra hin dabarree yoo qabattan, gaaffiiwwan torbanii guutuu itti fufaa
Gaaffii hojii dhabdummaa adda hin citiniif torbaawwan jiran qabachuu maltu.
eServices yoo fayyadamtan, geechistuu gaafii galmeessisuu qabdan kan torbanii ni qabdu jettu yoo agartan, torbanoota jiran akka qabdan ni beektu.
Gaaffiillee torbanii bilbilaan yoo galmeessistan, gaaffii torbanii galmeessisuuf filannoo ni dhaggeessu.
Yaadadhaa: Gaaffii hojii dhabdummaa adda hin citin argamaniif torbanoota hafan yoo qabattaniifi torbanoota sanneeniif ulaagaa kan guuttan yoo taatan, hammi faayidaa torbanii adda hin cinnee sinif kaffalama. Hammi sun torbanitti $300 dabalataa FPUC irraa kennamuu hin dabalatu.
Gaaffii haaraadhaf gaafadhaa
gaaffii haaraa gaafachuuf karaan hundarra salphaa ta'e Eenyummessaa eServices keessan fayyadamuudha. Faayidaawwan gaaffadhaa kan jedhu Alerts jalatti filadhaa.
Eenyummeessaa eServices uumuu yoo barbaaddan, gara esd.wa.gov/unemployment deemaatii Amma sarara irraan gaafadhaa filadhaa.
Gaaffii haaraa eServices irratti gaafachuu yoo hin dandeenyee, wiirtuu gaaffiillee hojii dhabummaa 800-318-6022 irratti bilbilaa Gargaarsi afaai bilisaa jira. Ergaa 711.
Gaaffii irra deebi'aa eegala
Torbanoota shanii gadiif gaaffiiwwan guutuu dhiistanii yoo turtan, Gaafiiwwan keessan irra deebitanii eegaluu hin qabdan. Torban dhumaa sin jala darbe irra eegaltanii gaaffiiwwan torbanii galchuu itti fufaa.
gaaffiiwwan guutuun torbanoota shanii fi isaa oliif yoo sin jala darbe, gaaffiiwwan keessan irra deebitanii eegaluu ni dandeessu. Sana gochuuf karaan hundarra salphaa ta'e sarara irraanii.
Toora interneetii keenya esd.wa.gov/unemployment/restart-your-claim irratti ilaalcha fuula battalaa (screenshots) kan qaban ajajawwan guutuu ilaalaa.
Akkasumas gaaffii keessan bilbilaan irra deebitanii eegaluu ni dandeessan. Torban gaaffii keessa irra deebitanii eegaluu barbaadan wiirtuu gaaffillee hojii dhabdummaa irratti bilbilaa.
Nuti sin gargaaruuf as jira
Dhumni faayidaawwan hojii dhabdummaa federalaa kan nama burjajjeessuu ta'u akka danda'u nuuf gala. Namoonni baay'een gaaffiillee gaafachuuf wiirtuu gaaffillee hojii dhabdummaa keenyatti ni bilbilu. Bakka bu'oota keenya bilbilaan argachuun baay'ee ulfaataa ta'a.
jalqaba qabeenyoota kanneen yaalaa:
odeeffannoo ammayyooman esd.wa.gov/COVID-19 (Ingliffaan) irrati argadhaa.
faayidaawwan akkamitti gaafachuu akka dandeessan esd.wa.gov/unemployment (Ingliffaan) irratti dubbisaa.
Faayidaalee hojii-dhabdummaatif akkamitti iyyatan
Faayidaaleen hojii-dhabdummaa maal faa dha?
Faayidaaleen hojii-dhabdummaa, dogongora ofii keessanii malee yeroo hojii dhabdan yeroodhaaf galii isiniif keenna. Maallaqichigalii keessan dhabdan bakka bu’a akkasumas yeroo hojii haaraa barbaaddan baasiwwan keessan kaffaluuf isin gargaara. Faayidaalen gibirawwan qacaraan(qacartoonni)0 keessan duraanii kaffalan irraa dhufa. Faayidaaleen fedhii maallaqaa irratti kan hundaa’u miti— dhiheenya hojii dhabuu keessan irratti qofa.
Sarara intarneetii irratti iyyadhaa (Ingiliffaa fi Ispaanish qofa)
Karaan gaarii fi saffisaan sarara intarneetii irratti iyyachuu dha. Iyyannoon sarara intarneetii irraanii kan argamu afaan Ingliizii fi Ispaanishii qofaani. Iyyachuun dura, seera qabeessa ta’uu keessanii fi iyyachuuf maal akka isin barbaachisu baraa:
Isin Lammii Yuunayitid Isteetis (U.S) yoo hin taane illee, faayidaalee hojii dhabdummaaf iyyachuu ni dandeessu. Dabalata waa'ee lammummaa fi mirga seeraa keessan hojii baradhaa.
Waa'ee waan yeroo hojii-dhabdummaadhaf karaa sarara irraa iyyata galfattan gaafannuu caalatti baraa.
Faayidaalee hojii-dhabdummaatif iyyachuuf, iyyata torbee galfachuuf fi odeeffannoo waa'ee faayidaalee keessanii argachuuf, waa'ee eServices, marsaaritee wabii qabu kan Qajeelcha Wabii Qacarrii caalatti baruuf, qajeelfama kanatti fayyadamaa.
Yoo “Determination Letter” (Xalayaa Murtee) nu irraa fudhattanii ta'e fi itti walii hin galle ta'e, karaan iyyaannoo itti galchan salphaan sarara irraan eServices dhani. Yookin, Benefits Appeal form (Unkaa iyyaannoo Faayidaalee) fayyadamuu maltu.
Faayidaalee argachuudhaf, qabda hojii barbaadun. Dabalata waa'ee hojii-barbaaduu sii hin dhiifamne.
Qabeenyota adda addaa hojjettootatiif maaloo fuula Hojiitti deebi'uu daawwadhaa.
Fuulli Hojii diduu gaaffilee waa'ee hojjettoota hojii isaanitti hin deebineef deebii kenna.
Amma sarara irratti iyyadhaa
(Afaan Ingilizii fi Ispaanishii qofa)
Bilibilaan iyyadhaa (turjumaanotni ni argamu)
Karaa bilibilaan iyyachuu ni dandeessu. Sababa weerara COVID-19 tin namoonni baay’een waa’ee iyyannoo isaanitiif waan bilbilaniif yeroowwan bilbila irraa baay’ee dheeraa dha. Isin gargaaruuf of kennineerra akkasumas turjumaanota afaanii qabna, kanaafuu yoo bilbilaan iyyachuu barabaaddan, gorsoonni gaarii kunneen isin gargaaru ni danda’u.
Bariidhan ykn barfachuudhan bilbilaa
Bariidhan ykn barfachuudhan bilbiluun carraawwan opireetara argachuu keessan ni dabala. (Sa’aatiwwan fi odeeffannoo giddu-gala iyyaannoo)
Nu ta’uu danda’a! Maqaan keenya ENYUUMMEESSAA bilbiltuu keessanii irratti hin mul’atu ta’a. Yoo bilbilli keenyaa isin darbe ta’e, adeemsa iyyannoo keessaniif yeroo akka daballuuf gara keenyatti deebistanii bilbiluu qabdu.
Bilbilaan iyyachuuf, 800-318-6022 tti bilbilaa.